Bageline: Jiid iyo Diidmada WordPress Theming | Martech Zone
Waxaa si la yaab leh, waxaan saakay la hadlayey hay'ad ku saabsan kakanaanta mawduuca ku dhex jira WordPress. Dadyowga nala midka ah ee labaduba ah kuwa horumariya PHP, waxay qabteen tan oo ah mawduucyo iyo fiilooyin si buuxda u fahmay WordPress API, ma xuma. Nasiib darrose, taasi ma ahan meel ay gaaraan shirkadaha iyo shaqsiyaadka qaarkood, in kastoo. Guntii iyo gunaanadkii - inaad wacdo horumariyaha markasta oo aad jeceshahay inaad wax ka beddesho qaabkaaga ama mawduucaagu qaali buu noqon karaa!
Bogga Khadka ayaa tan ku beddelaya tan alaabtooda, PlatformPro. Naqshadeynta qaab-dhismeedka dhammaadka hore ee Platform wuxuu ku saleysan yahay fikrad-cusub oo la yiraahdo qaybaha. Marka la soo koobo, qaybaha waxay la mid yihiin widget-yada WordPress (waxyaabaha jiidaha iyo-jiidashada ah) kaliya waxay si fiican uga shaqeeyaan sameynta naqshadaha waaweyn iyo adeegsiga aaladaha. Waa kuwan qaar ka mid ah sababaha ay qaybaha u yihiin kuwa laga cabsado:
Qaybaha koronto-iyo-ciyaar waa qaybo horay loo sii qorsheeyay oo naqshadeynta websaydhka ah, oo aad u kakan noqon kara (tusaale, muujiye muuqaal ah, marin, carousel, iwm.). Dhammaan koodhka ayaa weli ku jira oo maamula qaybta API; marka waxaad waligaa aragto waa isjiidasho iyo dhibic fudud oo fudud iyo xulashooyin.
Qaybaha Xakamaynta ayaa lagu rogi karaa ama lagu dili karaa iyadoo ku saleysan bog-bog ku-dar oo lagu daro noocyadooda boostooyinka iyo xulashooyinka u gaarka ah. Tani waxay ka dhigan tahay guud ahaan xakamaynta bog kasta oo ka mid ah boggaaga.
Horumarinta Waxaa abuuri kara oo wax ka beddeli kara naqshadeeyayaasha ku jira mawduuca aasaaska ilmaha. Taas macnaheedu waa naqshadeeyayaasha ayaa ku dari kara ama wax ka beddeli kara qaybaha jiida & hoos u dhaca ilbidhiqsiyo gudahood.
Qaybaha Fudud waxay ku daraan calaamadeynta html caadiga ah iyo jillaabyo gaar ah (kordhinta shaqeynta). Tani waxay hoos u dhigeysaa lambarro badan iyadoo ku siineysa shaqeyn dheeri ah isla waqtigaas.
Muuqaalo Badan Oo Aad Jeclaan Doonto
Qaab dhismeedka - Qaybaha jiidaha & hoos u dhaca dusha sare, Platform-ka sidoo kale wuxuu leeyahay dhisme qaabeys jiid ah oo loo jiidan karo cabirka bartaada. Waxaad dooran kartaa ballac ballaadhan oo cusub, ama aad u qaabeyn kartaa mid kasta oo ka mid ah 5 qaabab dhinac oo kala duwan ah; ka dibna dooro qaab-dhismeed ku saleysan bog-bog-bog.
bbPress iyo BuddyPress - Platform sidoo kale wuxuu taageeraa isku-darka BuddyPress wuxuuna leeyahay mawduuc madasha bbPress ah (soo-saare horumariye). Isdhexgalka ayaa ah mid aan kala go 'lahayn wuxuuna siiyaa dadka isticmaala Platform runtii joogitaan xirfad iyo firfircoon.
Habab Baaxad Leh iyo Joogto Qumman - PageLine sidoo kale waxay ku xisaabtantay qaabab kala duwan oo naqshadeyn ah. Waxaa jira laba siyaabood oo loogu dhiso boggaaga Platform. Habka ballaadhan oo ballaadhan ayaa kuu oggolaanaya inaad haysato waxyaabo ballaadhan oo ballaadhan (sida sawirrada asalka ah), iyo qaabka ballaadhan ee ballaadhan ayaa ku siinaya waxyaabo ballaadhan oo go'an iyo walxaha asalka ah.
Dulucda Carruurta - Mawduuca aasaasiga ah ee cunugga waxaa loo dhisay inuu kaa caawiyo inaad si fudud u qaabeeysid Platform-ka iyo habka ugu wanaagsan ee dhismaha websaydh. U isticmaal inaad ku dhex tuurto qaar ka mid ah naqshadeynta CSS, ama isticmaal 'jillaab' si loogu daro lambar sida HTML ama PHP meelaha mawduuca oo dhan. Waxay sidoo kale u dhiseen qaab fudud oo aad ku dari karto qaybo caadiya oo adiga kuu gaar ah!
Qiimo u goynta - Qiimaha hal liisan oo pro ah wuxuu ku kacayaa $ 95. Ruqsad horumariyaha isticmaalka badan ayaa lagu iibin doonaa $ 175, oo waliba ay kujirto waafaqsanaanta bbPress forum, sawirada iyo xiriiriyeyaasha laga saaray.
Tags: datasiftka jawaab celinta emaylkabartilmaameed-dhulFiidiyowyada Suuqgeyntamobiil fara badan
EyeTrackShop: Raadinta indhaha iyada oo loo marayo Web Cam
Platform waa aalad weyn oo loogu talagalay horumarinta WordPress! Raggaani waxay qabtaan shaqo dilaa ah iyagoo ka dhigaya barnaamijyadooda si fudud in la isticmaalo oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo ka badan intaad ruxmi karto ul aad u weyn at
Sii wad howsha wanaagsan. Ma sugi karo inaan arko waxa xiga!
Dib u eegis weyn Doug! Waxaan ku orday PaltformPro usbuucii la soo dhaafay anigoo aqrinaya nettuts + blog waxaanna la yaabay haddii ay dhab ahaantii tahay mawduuc weyn. Waxay umuuqatay mid wanaagsan inay runtahay, laakiin waan ku faraxsanahay inaan arko waxay sameyn karto. Waxay si fudud u beddeli kartaa habka aan u qaabeeyo goobaha waxayna umuuqataa inay waqti badan iga badbaadin karto.
Waad ku mahadsantahay codkan kalsoonida ah!
maqaal aad u wanaagsan Doug, waxaan kan ku iibsaday goob buddypress ah oo aan sameynayo. Waxaan hayaa nin naqshadeeye dibadeed oo hadda ka shaqeeya. Runtii waxaan rajeynayaa in la qabto
Jan 7, 2012 saacadu markay ahayd 3:27 PM
haye waxaan qabaa su'aal: suurta gal ma tahay in lagu daro menu dheeri ah oo leh khadad bogga ah, midka kore iyo kan bidix iyo sidoo kale in la dhigo siyaasad asturnaan iyo isku xirnaansho afeef hoose? maxaa yeelay in tan lagu sameeyo wordpress waa run dhib.
Jan 7, 2012 saacadu markay ahayd 3:34 PM
Nabadee Perla - miyaad ula jeeddaa Pagelines ama kaliya mawduuc WordPress ah? Iyadoo la adeegsanayo mawduuca WordPress, way fududahay in lagu daro menu kale iyo bayaanka hoose laakiin waxaad u baahan doontaa inaad hesho qof wax ka beddeli kara mawduucaaga taasna wuu ogyahay jidkooda ku wareegsan WordPress. Waxaa jira tiro dad ah oo halkaas jooga oo sameeya, in kastoo. Waxaan ka raadin lahaa 'wordpress designer' aaggaaga Google oo aan arko waxa aad ka hesho!
Jan 7, 2012 saacadu markay ahayd 5:33 PM
hi waxaan qabaa su'aal: suurta gal ma tahay in menu dheeri ah lagu daro bog
khadadka, liiska kore iyo kan bidix iyo waliba meel dhig asturnaanta asturnaanta
xiriiriyaha salka hoose? maxaa yeelay in tan lagu sameeyo wordpress waa run dhib
. waxaan ula jeedaa pagelines
Jan 7, 2012 saacadu markay ahayd 5:35 PM
waxaan ula jeedaa khadadka bogga
Jan 7, 2012 saacadu markay ahayd 5:58 PM
Xaqiiqdii waad ku dari kartaa aagga html lugta halka aad ku dari karto macluumaadkaas. Ma hubo liiska labaad, in kastoo. Taasi waxay u baahan kartaa xoogaa shaqo ah!